DASSK’s Freedom, Development, and Human Worth
As the world has been watching Burma with the renewed interest since the release of Daw Aung San Suu Kyi, it is important to recall her ideas and perspectives on promoting democracy, development and human rights in Burma and other third world countries – some of what makes her such an important leader […]
November 19, 2010 • By Daw Aung San Suu Kyi • Tags: Burmese, Daw Aung San Suu Kyi • Read more ➤
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်မှန်သည့်ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ရန် အချိန်မနှောင်းသေးကြောင်း၊ စစ်အစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကို ပြန်လွှတ်ပေးပြီး အမျိုးသား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် လမ်းဖွင့်ပေးရန် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ထပ်မံတိုက်တွန်း တောင်းဆိုလိုက်သည်။ […]
October 30, 2010 • By Network for Democracy and Development • Tags: 2010 Elections, Burmese, Election Laws, Ethnic Nationalities, National Reconciliation, Network for Democracy and Development, Political Prisoners, Weekly Political Events • Read more ➤
Weekly Political Events Regarding the SPDC’s Election (039-2010)
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်အခြေ စိုက်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်သော Network for Democracy and Development (NDD) သတင်းနှင့်သုတေသနဌာနမှ နအဖ၏ လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအခြေနေ အဖြစ်အပြက်များကို အပတ်စဉ် ရှာဖွေ စုစည်း ဖြန့်ဝေလျှက် ရှိပါသည်။ ထိုအပတ်စဉ် မှတ်တမ်းတွင် နအဖနှင့် ကြံ့ဖွံ့ တို့၏ လှုပ်ရှားမှု သတင်းအချက်အလက်များ အပါအဝင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့များ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၊ လက်နက်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လဲလှယ်ထားသော အဖွဲ့များ၊ နိုင်ငံတကာ အစိုးရ နှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြန်တွင်းပြည်ပမှ ပြည်သူလူထုတို့၏ လှုပ်ရှားမှု များနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း ပြည့်စုံစွာ စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။ […]
October 24, 2010 • By Network for Democracy and Development • Tags: Burmese, Network for Democracy and Development, Weekly Political Events • Read more ➤
Weekly Political Events Regarding the SPDC’s Election (038-2010)
A source close to local authorities of Muse District, Northern Shan State, said that setting up poll stations will be completed by 25th October 2010 as the elections nears.
Daw Bauk Ja, who has been assisting 17 farmers who sued Yuzana construction company for eviction of the farmers from their land without full compensation, said thatacourt in Phakant District of Kachin State has madeadecision to exonerate Yuzana company chairman U Htay Myint from prosecution. U Htay Myint is contesting in the upcoming elections as one of the Union Solidarity and Development Party candidates […]
October 17, 2010 • By Network for Democracy and Development • Tags: 2010 Elections, Burmese, Network for Democracy and Development, Weekly Political Events • Read more ➤